तपाईंले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा कति रेडियसन, कसरी जाँच गर्ने ? | Suvadin !
Sep 17, 2019 08:21
काठमाडौं । स्मार्टफोन आजको युगमा दिनचर्याको पहिलो महत्वपूर्ण आवश्यकता बनिसकेको छ। स्मार्टफोन बोक्नु अब विलासिताको नभएर आमजनको आवश्यक अनिवार्यता भइसकेको र यसको पहुँच समाजको निम्‍न वर्गसम्म भइसकेको प्रमाणित गरी राख्‍नु पर्दैन
समय-समयमा स्मार्टफोन को प्रयोगलाई लिएर यसका हानिकारक पक्ष उजागर हुदै आएका छन् विज्ञानको भाषामा एउटा शब्द छ- रेडिएसन । यस शब्दको व्यापक अर्थ छ ,रेडिएसन सबै वस्तुले गर्छन ,यहाँसम्म की तपाईको शरीरबाट पनि रेडिएसन भइरहेको हुन्छ। तर कुनै कुनै वस्तु बाट निक्लिने रेडिएसनको मात्रा भने मानिस शरीरलाइ हानिकारक हुन्छ।
मानिसले प्रयोग गर्ने उपकरण मोबाइलबाट पनि रेडियसन उत्सर्जित भइरहेको हुन्छ। तपाईले बेला मौकामा मोबाइल कसरी प्रयोग गर्ने ,आफूबाट मोबाइल टाढा राख्‍नेबारे पढ्नु भएकै होला,किनभने यसबाट निक्लिने रेडिएसनले तपाईको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्छ। मोबाइलबाट निक्लिने रेडिएसनलाइ ‘स्पेसफिक अब्जर्भेसन रेट’ ले जाँचने गरिन्छ।
तपाईले प्रयोग गर्ने मोबाइलले उत्सर्जित गर्ने रेडिएसनको ‘स्पेसफिक अब्जर्भेसन रेट’ के हो भन्‍नेबारे तपाईलाइ जानकारी हुनु आवश्यक छ। यस समबन्धमा विश्वका विभिन्न कम्पनीहरुले निर्माण गर्ने मोबाइलबाट निस्कने ‘ रेडिएसन भैल्यू’को लिस्ट सार्वजनिक भएको छ।
‘जर्मन फेडरल ऑफ़िस फर रेडिएसन प्रोटेक्सन’ले गरेको अध्ययन अनुसार विभिन्न मोबाइलको रेडिएसन भ्यालु यसप्रकार रहेको छ।
विभिन्‍न मोबाइल फोनको रेडिएसन तालिका
साओमी एवान यस रेडिएसन तालिकामा सबैभन्दामाथि रहेको छ। कम्पनी ले यो मोडल २०१७ मा बाजार मा ल्याएको थियो। यस मोडल को रेडिएसन भाल्यू १.७५ बाटप्रति किलोग्राम रहेको छ।
अत्यधिक रेडिएसन उत्सर्जित गर्ने स्मार्टफोन उतपादन गर्नेहरुमा विश्व कै नामी कम्पनीहरु रहेका छन्। अत्यधिक रेडिएसन उत्सर्जित गर्ने लिस्टमा रहेका १६ मॉडल मध्ये ८ मॉडल चिनिया कम्पनीका उत्पादन हुन।
एप्पल कम्पनीका दुइटा मॉडल आईफोन -७ र आईफोन ८ पनि धेरै रेडिएसन उत्सर्जितमा पर्छन। गूगलले निर्माण गरेको पिक्सेल मोडलको मोबाइल सेट पनि यस लिस्टमा समावेश रहेको छ।
मोबाइलबाट निक्लिने रेडिएसन मानव मस्तिष्क र शरीर दुबैलाइ हानिकारक छ। तपाईले मोबाइल किन्दा यसले उत्सर्जित गर्ने रेडिएसन जांच गरेर मात्रै किन्नू होला। १.५ बाटप्रति किलोग्राम भन्दामाथिको रेडिएसन भैल्यू तपाईका लागि हानिकारक छ।
तपाईले आफूले प्रयोग गर्ने मोबाइलको रेडिएसन जाँच पनि गर्न सक्नुहुन्छ ,यसका लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल बाट *#०७# डायल गर्दा यसले उत्सर्जित गर्ने 'रेडिएसन भ्यालु' देखाउँछ।